Motherboard Z390 tsara indrindra ho an'ny lalao - 2020 (hevitra) - Lists
Ireo zana-kazo Z390 dia nitondra an'izao tontolo izao tamin'ny tafio-drivotra niaraka tamin'ny seho kilasy tsara indrindra. Izy ireo dia nitombo ho motherboard malaza be izay manohana ny processeur farany. Ny fampidiran'i Intel ny chipset z390 dia niparitaka vetivety toy ny afo mando, ary nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny hazakazaka ireo mpanamboatra ambaratonga ambony.
Na ny anarana lehibe toa ny MSI, Asus, ary Gigabyte aza dia nisafidy ny hitondra anao safidin'ny premium. Na izany aza, nanjary safidy safidy tsy nampoizina izany. Androany, be loatra ny motherboard z390 eny an-tsena, ary mety ho lasa mampatahotra koa ny mandinika ny tsara indrindra amin'izy ireo
Na izany aza, zana-kazo Z390 tsara indrindra ityny famerenana dia mitondra anao ny safidy tsara indrindra isaky ny vazan'izao tontolo izao. Tsy mila mijery na aiza na aiza ianao satria ity famerenana ity dia hanome anao fampahalalana fohy momba ny motherboard tsirairay. Ho fanampin'izay, misy ny làlan'ny mpividy, ary misy ny fanontaniana napetraka matetika mba hanampiana anao handray fanapahan-kevitra tsara.
Android TV Box tsara indrindra - Torolàlana momba ny fividianana
Andao hokapaina ny fanenjehana ary atombohy amin'ny:
Motherboard Z390 tsara indrindra (2020) miaraka amin'ny famerenana:
Eo an-tampon'ilay lisitra dia manana safidy mahasarika avy amin'ny MSI ianao satria ity dia manohana ny 8 faranyfahasy 9fahaprocesseur an'ny taranaka avy any Intel. Mahazo mifanentana amin'ny Pentium Gold sy i Celeron ho an'ny safidin'ny processeur isan-karazany. DDR4 izy io, izay mahatonga azy io ho fenon'ny haingam-pandeha sy ny fahombiazan'ny Z390.
Mahazo fitadidiana ianao hanohana ny overclock hatramin'ny 4.4 Gigahertz, ka hahatonga azy io ho safidy avo lenta. Izy io dia miaraka amin'ny port USB farany sy ny fanohanana Gen2. Ny heatsink nitarina dia fanampiny mendrika hanomezana fanaparitahana hafanana tsara kokoa ho an'ny motherboard.
Izy io dia manana fampiroboroboana ny sonia MSI mba hiantohana ny fandefasana optimum ho an'ny singa fanodinana. Turbo M.2 dia miantoka hatramin'ny 32 Gbps ny famindrana angona ao amin'ny SSD. Maka ny sonian'ny MSI, manana HD sy modely feo mitoka-monina izy io mba hanomezana kalitao tsy lavorary miaraka amin'ny fanohanan'ny fantsona 8.
Na izany aza, tsy marina indrindra 'tsara indrindra-kilasy' satria izy io dia fidirana Z390 misy fidirana mahazatra. Noho izany, safidy mety amin'ny teti-bola izany ary ampy tsara ho an'ireo izay te-hizaha ny motherboard Z390.
Kalitaon'ny fananganana MSI
BIOS ho an'ny mpampiasa
Tsara ho an'ireo tia be loatra
Fanohanana rindrambaiko mahavariana
Tsy safidy tia namana. Mitaky anao hanana traikefa amin'ny fametrahana
Tsy mazava ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa
Raha tianao ilay motherboard teo aloha fa nitady fanatsarana bebe kokoa sy bebe kokoa amin'ny sonian'ny 'MSI', dia azo antoka fa hifanaraka amin'ilay faktiora ity iray ity. Ity motherboard ity dia miaraka amin'izay rehetra nananan'ilay teo aloha, toy ny 8fahaGen 9fahafanohanana ny processeur gen, ary ny seranan-tsambo farany ho an'ny fandefasana herinaratra.
Na izany aza, mahazo seranan-tsambo roa M.2 izy ary misy seranana USB 3.1 Gen2 bebe kokoa hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana. Mazava ho azy, inona no ho motherboard raha tsy misy ny estetika an'i MSI? Eto ianao dia manana jiro mistika sonia miaraka amin'ny fanaraha-maso RGB hahazoana antoka fa azo ekena tanteraka ny fiainana.
Ankoatr'izay, ny maodelin'ny fifandraisana Bluetooth sy wifi namboarina dia mitondra anao hafainganam-pandeha sy hery tsy misy tomika. Misy ny fanavaozana ny modely audio mitokana mba hanomezana kalitao tsara amin'ny fampisehoana feo. Heatsink manitatra sy mpampifandray vy miaro anao dia mahazaka fahombiazana amin'ny fampisehoana.
Afaka manampy GPUs marobe ianao, mahazo hery miavaka amin'ny fanamafisana ny fahatsiarovan-tena sy ny overclock. Izy io dia manana fananganana matanjaka sy BIOS tena sariaka. Raha olon-tianao loatra ianao dia tsy handiso fanantenana anao ity iray ity. Na dia mety tsy mifanaraka amin'ny safidin'ny tsirairay aza ilay motherboard voalaza etsy ambony dia azo antoka fa manome fahafaham-po ny filanao Z390 rehetra io.
Safidy betsaka amin'ny singa, RAM, ary processeur ho fanaingoana
LAN sy BlueTooth namboarina tao anaty boaty
Mihaona amin'ny fanantenana amin'ny fahombiazan'ny motherboard Z390
Fanamboarana mavesatra kokoa sy malalaka kokoa ho an'ny motherboard Z390
Toa mitazona hafanana avo kokoa noho ny motherboard hafa
GIGABYTE dia manaparitaka azy amin'ny fiakarana mamiratra amin'ny motherboard Z390. Eto ianao dia manana fampifangaroana mahomby amin'ny fampisehoana, ny hafainganana, ny hafanana ary ny lanja amin'ny safidy tokana. Izy io dia miaraka amin'ny fanohanana ny 8 faranyfahaary mpanodina 9gen, ao anatin'izany ny i3 hatramin'ny i9, Celeron, ary Pentium. Ny volavola VRM tsy manam-paharoa dia ahafahany manohana mpikirakira dingana valo.
Miaraka amin'ny lohateny 8 + 4 pin, mahazo karazana configurations feno ho an'ny PC tsy misy hafa ianao. Ny tena zava-dehibe dia miaraka amin'ny fanaraha-maso Smart Fan 5 sy ny fifanarahana mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fihenan-tsakafo. Araka izany, azonao atao ny mitazona azy tsy misy tohiny mba hanomezan'ny motherboard motherboard fampisehoana avo lenta tsy tapaka.
Ny tsimatra nentim-paharazana dia soloina tsimatra matevina mba hiantohana ny faharetan'ireo fikirakiran'ny mpampiasa. Tsy mila miahiahy momba ny fanimbana ara-batana ny motherboard ianao. Ny fiadiana mahery vaika dia manamafy izany. Ny wifi dia miaraka amina fanohanan'ny LAN, ary miaraka amina milentika M.2, manana CPU mahay ianao.
Mazava ho azy, ity motherboard ity dia mitaky fahamaimaizana amin'ny estetika ho an'ny faritra marobe mba hiantohana ny fahombiazany. Tsy afaka manantena zavatra betsaka momba ny antso an-tariby amin'ilay maodely ianao. Raha tsy miraharaha an'izany ianao, ity dia safidy tonga lafatra amin'ny fomba rehetra jerenao.
Mora ampiasaina ary tena safidin'ny mpampiasa
Fananganana maharitra miaraka amin'ny tsimatra matevina hanoherana ny fahasimbana
Fametrahana mivantana sy fiasa mivantana an'ny motherboard Z390
Ny BIOS dia tsy sariaka amin'ny mpampiasa ary mety mitaky fotoana kely vao zatra
Tsy misy wifi namboarina na seranana fampisehoana ho an'ny fifandraisana hafa
Indray mandeha indray ianao dia mahazo kinova nohavaozina hafa tamin'ny safidy teo aloha ao amin'ilay lisitra. Ity dia miaraka amina endrika 12 + 2 VRM fa tsy ilay mahazatra 10 + 2. Izy io dia miantoka ny fifanarahan'ny rehetra sy ny fahombiazany tsy azo ihodivirana avy amin'ny mpanodina, satria afaka mioty hatramin'ny 5 GHz fampisehoana ianao raha toa ka mahazo tsara ny masamihafa.
Ity iray ity dia miaraka amina wifi namboarina miaraka amin'ny fahaiza-hafainganam-pandeha efa ho 2 Gbps hanatanterahana ny fitakiana fifandraisana. Izy io dia miaraka amin'ny fanohanan'ny mpankafy Smart 5 mahazatra miaraka amin'ny fanampiana vaovao an'ny RGB LEDs. Marina izany! Mahazo fampifangaroana jiro LED mamorona izay miasa tena tsara amin'ny drafitra monochrome an'ny motherboard ianao.
Izy io dia manana mpiambina indroa M.2 mafana ary manohana fantsona roa ho an'ny fahatsiarovana DDR4. Raha atambatrao ny fiasa rehetra, ny fanaingoana, ny fandefasana ary ny fanohanan'ny herinaratra, ity motherboard ity dia azo antoka fa ho azony amin'ny vidiny mifaninana be.
Rindranasa mavesatra andraikitra
Ireo singa Premium-grade ho an'ny famatsiana herinaratra tsara indrindra
Seranan-tsambo USB maro sy seranana hafa mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fifandraisana
Sela sensor marobe momba ny fanaraha-maso ny mari-pana feno
Ny BIOS dia tsy intuitive ary mitaky fotoana hampiasana
Tsy manana LED debug na CMOS hery
Raha ny horonan-tsary sy sary no takinao, inona no mety hifanandrify amin'ny ASUS ary Prime Z390 no ao anaty lisitra? Ity sangan'asa mahafinaritra ity dia mitondra anao izay rehetra atolotry ny Z390. Mahazo fifandraisana haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amin'ny bandwidth PCI 3.0 express sy 2.0 ianao. M.2 izay manohana ny hafainganam-pandeha 32 Gbps dia mampifangaro tsara indrindra ao amin'ny kilasy USB 3.1 sy ny Type C mba ho maro karazana.
Ny famolavolana Optimem II miaraka amina fananganana mangatsiatsiaka dia mahatonga azy io mahatohitra hafanana be satria mifehy tsara kokoa ny mari-pana. Noho izany, azonao atao ny manatsara ny overclock, izay mihoatra ny motherboard rehetra teo aloha. Mazava ho azy, ahoana no ahafahanao manadino ny sonia fanatsarana dimy fomba fantatra an'i Asus.
Ny efitrano fanatsarana AI dia miantoka ny fifehezana manan-tsaina ho an'ny overclocking, fifehezana hafanana ary fampisehoana mandeha ho azy. Asus Prime Z390 dia mitondra anao tsara fampisehoana an-tsarimihetsika tsara indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny RealTek ho an'ny modely feo. Tsy izay ihany! Mahazo sary sy famolavolana hatsarana mahafinaritra ho an'ny antso maoderina miaraka amin'ny jiro LED ianao.
Z390 eo afovoany miavaka
Safidy tsara indrindra ho an'ny fanovana horonan-tsary sy ny famolavolana sary
Feno fiasa manintona
Ny BIOS sy ny mpamily dia mila fanavaozana amin'ny tanana
Ny fanavaozana dia mety hanasarotra kely ny fampiasana BIOS sy ny Drivers
Mety manontany tena ianao hoe maninona no misy Asus Prime hafa? Ity, ity dia ho an'ny mpampiasa avo lenta amin'ny fampiasam-bola miditra. Ity iray ity dia safidy tsara indrindra ho an'ireo mpanamboatra PC izay te-hanamboatra ny tariny. Na vao manomboka ianao na mpandrafitra rafitra mpanelanelana dia safidy mifanentana be io.
Tahaka ny volavola teo aloha, ianao dia mahazo safidy fifamatorana haingam-pandeha sy fanatsarana fahatsiarovana mahatalanjona izay manome overclocking tsara indrindra amin'ny kilasy. Mahazo famindrana angon-drakitra tsy voafaritra ianao ary famolavolana maivana kokoa izay sonian'ny Asus. Ny sary sy ny estetika dia nahazo tweak teto niaraka tamin'ny fampisehoana mahatalanjona.
Na izany aza, satria mahasoa ny tetibola, dia mitaky kapoka kely amin'ny isan'ny seranan-tsambo amin'ny departemanta samihafa. Ny ankamaroan'izy ireo dia fenitra efatra. Izy io dia motherboard ATX haavo miaraka amina fampidirana maivana kely, izay mety hampivadi-po ny mpampiasa sasany. Amin'ny ankapobeny, sandam-bola be izy io.
Sarobidy ho an'ny vola sy fampisehoana avo lenta
Namboarina manokana ho an'ny mpampiasa
Safidy tsara ho an'ny mpanorina PC
Mihaona amin'ny filalaovana lalao sy sary
Manohana 8fahasy 9fahampitrandraka gen, ao anatin'izany ny processeur i
Manamboatra fitsangatsangana kely miaraka amina fampidirana plastika ireo singa fananganana
Misy seranana voafetra sy fifandraisana izay afaka mametra ny fananganana feno
Raha mitady safidy mora vidy teti-bola kokoa noho ny marika premium ianao, ASRock dia manana safidy tsara ho an'ny motherboard. Ity iray ity dia manana fidirana amin'ny zotram-baravarankely izay saika ny fampiasa rehetra amin'ny motherboard Z390 mahazatra. Mahazo ny fifandraisana, ny overclocking ary ny sisa. Na izany aza, azonao atao ny mioty ny tombony feno azon'ny Z390 avo lenta omena anao.
Tsy toy ny ankamaroan'ny motherboard, misy fisehoana manaitra iray. Izy io dia manana fanohanana tsianjery avo roa heny ka hatramin'ny 64 GB, ary izany no mampiavaka azy. Izy io dia manana fampisehoana voalanjalanja tokoa ary manana safidy voafetra. Raha te hankafy ny fanavaozana ny Z390 ianao nefa tsy misy fandinihana lalao sy sary be dia be dia ho vita io asa io.
Mazava ho azy, raha manana fampisehoana tsy andaniam-pahalalana sy filàna kilalao ianao dia tsy handiso fanantenana anao izany. Amin'ny ankapobeny, dia ho an'ireo mpampiasa PC izay te-haharaka ny toetr'andro fa tsy manana fampiasana PC matetika. Ara-dalàna, raha matihanina miasa ianao, dia safidy mora vidy izany.
Safidy fidirana tsara
Fanohanana fitadidiana 64 Gbps
Teti-bola sy sanda amin'ny vola
Tsara ho an'ny mpampiasa PC tsindraindray
Hikarakara ny fepetra takian'ny matihanina
Tsy manolotra ny tombony feno amin'ny motherboard Z390
Izy io dia mety amin'ny filalaovana lalao sy sary indraindray
8. EVGA Z390 Maizina
Saika ny motherboard rehetra omena etsy ambony dia miditra amin'ny ambaratonga avo lenta miaraka amin'ny fahafaha-manao avo lenta. Na izany aza, ity iray ity dia motherboard Z390 tena kilasy tsara indrindra ao amin'ilay lisitra. Izy io dia mitondra anao fiasa feno sy zava-bita avo lenta. Raha tena te-hahatsapa ny Z390 amin'ny voninahiny ianao dia mila mahazo an'ity.
Avy hatrany amin'ilay ramanavy, manana mpampitohy herinaratra 24-pin ianao miaraka amin'ny pin-8 ho an'ny herin'ny CPU. Mahazo 4.6Ghz miavaka amin'ny overclocking ianao miaraka amin'ny memoara fantsona 2DIMM. Misy karazana A, seranan-tsambo Type C, ary manodidina ny 7 USB 3.1 Gen 2 Ports hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana maoderina.
Azonao atao ny mampifangaro hatramin'ny SATA enina. Misy 2 M.2 ary fanohanana fahatsiarovana hatramin'ny 32 GBSP. Misy Bluetooth, wifi ary fanohanana am-peo tsy manam-paharoa. Izy io dia manana LEDs ary famaranana matte marevaka izay miasa tsara amin'ny jiro sy ny sisa. Mahazo fanohanana feno amin'ny LED, fampisehoana ary fananganana monitor hafa ianao hahazoana ny statistikan'ny CPU feno.
Izy io dia miaraka amin'ny fizarana 17 an'ny VRM nomerika sy ny fitadidy fahatsiarovana Intel Optane. Ianao koa dia mahazo audio 5.1 fantsona HD + EVGA NU Audio. Misy ny wifi indroa tarika farany sy ny Bluetooth 5.0 farany, ary mahazo atiny volamena mitombo ianao miaraka amina slot PCIe nohamafisina. Misy safidy tsy azo antoka sasany, toy ny bokotra SafeBoot hahazoana antoka ny famerenana farany fantatra.
Raha hamintina azy amin'ny teny fohy, dia mitondra anao saika ny zava-drehetra azon'ny motherboard Z390 atolotra miaraka amin'ny mifanentana tanteraka. Mazava ho azy fa mitovy ihany koa ny vidiny.
Fifandraisana feno sy isan-karazany ny endri-javatra
Mameno ny fepetra takiana amin'ny fanaraha-maso
LED ho an'ny antso estetika, ary maodely marevaka
Modely Z390 kilasy tsara indrindra
Mandany vola be lavitra noho ireo motherboard Z390 hafa
Mety handray tol amin'ny rafitra raha mamoaka izany dia mety tanteraka
Torolàlana ho an'ny mpividy ho an'ny motherboard Z390 tsara indrindra:
Mazava ho azy, tsy mitsaha-mivoatra ny tsena, ary hisy fotoana hahatongavan'i Z390 ho teknolojia taloha. Raha mieritreritra mividy azy ianao dia azonao antenaina fa haharitra dimy taona eo ho eo alohan'ny hahatongavan'ny toetr'andro.
Efa maro ny safidy tsara kokoa, nefa mitovy ihany ny vidiny. Noho izany, raha mieritreritra motherboard Z390 ianao, dia tsara kokoa ny mitadidy ireto hevitra manaraka ireto ao an-tsaina:
1. Safidy vonona hanorina
Ny lafiny tsy mitombina indrindra amin'ny motherboard Z390 dia ny customization-friendly user. Noho izany, tsy maintsy ataonao antoka fa fantatrao izay ataonao amin'ny PC. Tsy afaka manantena ireo matihanina hafa ianao hanampy anao amin'ny lahasa. Safidy tena tsara ho an'ireo izay mianatra manangana na te hampiasa vola tsikelikely amin'ny CPU-ny.
2. Diniho ny Overclocking Sy Memory
Tokony handinika ny fanohanan'ny fahatsiarovana sy ny fetran'ny overclocking ianao raha mila maharitra maharitra ny motherboard Z390. Tsy tokony halaina amin'ireo lafin-javatra ireo ianao, na raha tsy izany dia miafara amin'ny motherboard efa tonta izay mety hahavita ny asa.
3. Fampisehoana mangatsiaka kokoa
Ny fanohanan'ny Fan dia tsy miova. Ny motherboard sasany dia manohana mpankafy roa faran'izay tsara. Mila mpankafy telo ka hatramin'ny dimy farafahakeliny ianao hitazonana ny mari-pana optimum, indrindra ho an'ireo asa mavesatra amin'ny fampisehoana. Toy izany koa, ny fakana am-potoana be loatra dia hahatratra tolotra iray.
4. Safidin'ny fifandraisana
Tsy afaka mifandefitra amin'ny fisian'ny USB ianao satria lasa takiana tsy maintsy ilaina izany raha te hampifandray fitaovana marobe ianao. Na manana rafitra fanamafisam-peo ianao, fitehirizam-boky, mpanara-maso lalao, na zavatra hafa, tena ilaina ny USB. Toy izany koa, ny SSD na SATA dia misy lanjany lehibe ihany koa.
Aza adino ny fifandraisana wifi sy Bluetooth amin'ny vanim-potoana dizitaly ankehitriny izay mitaky anao hanana fifandraisana farany ho an'ny hatsarana haingam-pandeha.
5. lafiny ara-batana
Ny CPUs maoderina dia mitaky anao hanana endrika amboarina sy endrika tsara tarehy. Tsy azonao jerena ireo lafin-javatra ireo, indrindra raha mila zavatra mifangaro amin'ny filan'ny décor ankehitriny ianao. Azo atao ny manao tsirambina ny LED sy ny estetika hafa raha manana kabinetra manarona ny motherboard ianao.
Ny fiarovana tsara sy ny singa avo lenta no zava-dehibe indrindra amin'ny motherboard maharitra. Raha fantatrao fa tsy maintsy mahazo rindranasa, lalao ary sehatra mitaky fahombiazana avo lenta ianao, dia tsy azonao atao ny miahiahy momba ny hafanana be loatra na ny famoahana entana mora vidy.
Ny ankabeazan'ny motherboard Z390 dia safidy safidy teti-bola ho an'ny fampiasana matihanina sy manokana. Ireo dia tsara ho an'ny singa PC an-trano izay ahafahanao miloka amin'ny filalaovana tsindraindray. Raha te hankafy lalao manomboka amin'ny 2015 ka hatramin'ny 2020 ianao, dia hanome anao fampisehoana tsara indrindra izany.
Ankoatr'izay dia miasa tsara ho an'ireo mpanova sary sy sary. Amin'ny ankapobeny, ireo no safidy mety amin'ny fampisehoana mahazatra. Ireo dia tsara amin'ny fampiasana ny 9fahaprocesseur gen avy amin'ny Intel.
1Q. Z390 Mendrika Hividy?
taona:Raha afaka mitantana ny teti-bola ianao ary mampiditra amin'ny Z390 avo lenta, dia azo antoka fa mendrika ny fampiasam-bola. Z390 dia miaraka amina endri-tsarimihetsika premium premium sy singa tsy ho hitanao mora amin'ny motherboard hafa. Natomboka tamin'ny taona 2020 izy io, ka azonao antenaina fa hanohana ny maro izany
2Q. Ny Z390 Motherboard ho avy ve-porofo?
taona:Raha mampiasa vola amin'ny motherboard Z390 ianao dia mety haharitra mandritra ny dimy taona tsy misy faharetana. Hanaraka ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana izany. Na izany aza, tsy hifanaraka amin'ny fanampim-panazavana farany ao anaty lisitra izany amin'ny specs sy configurations avo lenta.
3Q. Z390 Motherboard Gaming Tsara?
taona:Ny motherboard Z390 dia miaraka amina karazana endri-javatra, ao anatin'izany ny overclocking, ny fanohanan'ny mpankafy, ary ny safidim-pifandraisana marobe izay safidy tsara ho an'ny mpilalao PC. Tsy hahita fahasamihafana firy ianao, ary raha hainao ny manamboatra azy tsara, dia mety hihoatra ny PC filokana avo lenta izany na hampifanaraka azy ireo.
4Q. Iza no tokony handinika ny Z390?
taona:Raha mpampiasa Intel mahatoky ianao izay tsy matoky an'ity mpampandeha ity fotsiny, safidy lehibe i Z390. Misy AMD Ryzen sy mpikirakira hafa eny an-tsena. Na izany aza, misy olona tsy sahy manandrana azy ireo satria mihoatra ny fitakiana filokana no ananany. Ho azy ireo, ny Z390 dia kilasy tsara indrindra amin'ny fampiasana matihanina sy manokana satria azonao atao ny mampiasa 8fahasy 9fahagen Intel processeur mahomby.
Hamarino tsara foana ireo singa hafa sy takiana amin'ny fampiasam-bola alohan'ny hividiananao ny motherboard. Ity lisitra ity dia mitazona hatrany ireo mpampiasa ambaratonga fidirana, antonony ary avo lenta rehefa mampiditra anao amin'ilaymotherboard Z390 tsara indrindra.Antenaina fa ny tsirairay amin'ireny dia manaporofo fa manampy fanampiny. Raha manana fisafotofotoana ianao, angamba ny toro-làlana ho an'ny mpividy sy ny FAQs dia hanampy anao amin'ny fahazoana tsara ireo motherboard ireo.
Ity lisitra ity dia misy safidy izay manampy anao tsy hanaraka ny daty ary hihena amin'ny safidy hafa tsy tambo isaina. Mahazo haavo avo lenta indrindra ianao. Noho izany, alao ny fisafidianana tsara indrindra hatramin'ny marika ambony ka hatramin'ny marika tsy dia malaza, eny fa na dia ireo mahavita ny asa aza.
Android VEGAS-X MOD APK alaina maimaim-poana!
Inona no anjaran'ny Feo Kely Season 2
alatsaho amin'ny birao manontolo ny birao manontolo
efa misy mpangalatra ve isika eo
ny lalao tsy voasakana 66 dia eo an-tampony
horonantsary download youtube maimaim-poana amin'ny Internet
sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet maimaim-poana